iPhone 6 were ka njọ mgbe ọrụ malitere mkpesa nke a isi oghom ke imewe nke ahụ bụ ekwe nke ahu nke smartphone n'okpuru ụfọdụ mgbali, karịsịa nke na mgbe ekwentị nọ na a n'akpa uwe nke a uko trouser / jeans. Pictures malitere idei mmiri na Internet na-egosi nke ọma kpebisiri Aluminom ozu nke iPhone 6. ndị zụtara ọhụrụ a iteration nke smartphone malitere lụtara na Apple ụlọ ọrụ na - na a maara na-emepụta mara mma Deere, ịmata haziri ma adịchaghị onye ngwá electronic - site n'ikwu na ọhụrụ sleeker smartphone bụ enweghị ike iguzo ruo eyi na dọkatụrụ adọka nke anọ na a uko n'akpa uwe.
Part1: Otu mfe ngwọta: 1 Pịa nyefee data si iPhone ka Huawei
Ka e kwuru tupu na nyefe si IOS ka android bụghị ihe nke ma ọ bụrụ na ihe kwesịrị ekwesị software omume na-eji na nke a. Iji mee ka usoro smoother Wondershare MobileTrans bụ otu n'ime ngwa na hụ na data n'etiti IOS na Huawei ngwaọrụ na-agafere na dị nnọọ a click.
Iji mee ka n'aka na data transfer n'etiti iOS na Huawei ngwaọrụ bụ mgbe otu ihe iseokwu onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ndị na-esonụ usoro a soro nzọụkwụ site nzọụkwụ na-enweghị nzọụkwụ ọsọsọp.
Ozugbo ngwa ka okokụre echichi onye ọrụ ga-esonụ na ihuenyo si ebe nhọrọ nke mmalite ugbu a bụ na-ahọrọ:
The ọrụ na onye ga ugbu a ndị na-esonụ na ihuenyo site ebe "Malite" nhọrọ bụ-ahọrọ nke ga-apụta otu ugboro òké pointer na-dị n'elu ekwentị na ekwentị transfer nhọrọ:
Cheta na: Tupu ọkụkụ mmalite button onye ọrụ kwesịrị jikọọ ma ndị handsets ntụgharị Huawei na IOS ka PC ma ọ bụ laptọọpụ ka nke Ijuanya Share Mobiletrans e arụnyere. d. Ozugbo software achọpụta ma ndị igwe-esonụ na ihuenyo ga-egosi na kọmputa
Ozugbo software achọpụta ma ndị igwe-esonụ na ihuenyo ga-egosi na kọmputa:
Onye ọrụ kwesịrị ka kụrụ "Malite Copy" dị ka e gosiri na ọnụ ọgụgụ n'okpuru mere na data nyefe si IOS ka Android ma ọ bụ Anglịkan amalite:
Dị ka usoro a butere ndị na-esonụ ákwà ga-apụta na kọmputa LCD:
Onye ọrụ kwesịrị ichere ruo mgbe ọnọdụ mmanya akụrisị 100% na mezue usoro. The data transfer site na otu mobile n'elu ikpo okwu ọzọ e dechara.
Na-ewu ewu Huawei ngwaọrụ a na-eji
Ndị kasị ewu ewu Huawei na ngwaọrụ na bụ na iji n'oge bụ Huawei ọdọk Nwunye 7 nke bụ naanị ngwaahịa na a na-kewapụrụ ike site Chinese Mobile Giant n'ime US ahịa dị ka nke ọma.
Iri-ewu ewu Huawei ngwaọrụ ke USA
Na-esonụ bụ iri kasị ewu ewu na Huawei igwe na USA. The data e amịpụtara si http://consumer.huawei.com/us/mobile-phones/index.htm
1. ọdọk Nwunye 2 4G
5. Huawei ọdọk Y TracFone
8. U 2800A Go ekwentị
9. Huawei rụbichiri na mgbidi
Part2: Issues banyere ibuga data si iOS ngwaọrụ Huawei igwe
Nyefee data site na otu mobile ọzọ bụ ihe na e were dị ka-agaghị ekwe omume tupu yiri teknụzụ na agbam onya. Platform interrelationship bụ ihe na nesite ruru ka mwepụta nke elu eji software omume na ọ bụghị naanị nyefee data si IOS ka Huawei (android) igwe kamakwa jide n'aka na ọ bụghị ọbụna otu mpempe a gbanwere. Ke Ruth nke ọganihu na nkà mmụta sayensị na nkà na ụzụ Ọ bụ nnọọ nzukọ iji mara na ma ndị mmadụ na-eche ihu mbipụta na-ebufe data si IOS ka Huawei ma ọ bụ ndị ọzọ na android ngwaọrụ. E nwere ọtụtụ mbipụta na otu onye pụrụ ihu mgbe wetere usoro na kasị Ugboro ndị e depụtara n'okpuru ebe:
Platform interrelation nke
The IOS na android usoro na-wuru na dị iche iche terminologies ma ma jide n'aka na ike n'ezi ihe nke nwoke usoro ẹnịm ke kasị mma na n'ụzọ. IOS na nke a na-ewe ihe ndị bara uru otú a ka ọ dị nnọọ obere otú ahụ na a virus na-awakpo ihe IOS ngwaọrụ nke ọ bụla n'ụdị. N'aka nke ọzọ na android usoro bụ na-emeghe ndụ na onye ọ bụla nwere ohere ka yiri ngwá ọrụ na ụfọdụ mmepe ihe ọmụma pụrụ ịzụlite na android ngwa enweghị ihe ọ bụla nsogbu. Ọ bụ ya mere ike n'ezi ihe na mmepe metụtara mbipụta na machibido nyefe nke data si IOS ka Huawei ngwaọrụ.
Anọghị nke kwesịrị ekwesị software omume
Ọtụtụ n'ime ndị ọrụ mgbe ahụ kwesịrị ekwesị software omume nyefee data si IOS ka Huawei ngwaọrụ na maka otu ihe ahụ ọ na-e depụtara dị ka nke na ebe a. Ọ dabara nke ọma na e nwere software omume dị ugbu a nke na-n'aka na data transfer bụghị ihe nke mgbe nile. Ọ bụkwa na-ahụ kwuru na ndị a software omume nwere multi tasking ikike na maka otu ihe ahụ ha tọghata IOS data ka Android na a nnọọ ngwa ngwa ọnụego na Anglịkan.
Isi Iyi nlereanya metụtara mbipụta
The ọrụ na-eche ihu mbipụta na ikwu na isi iyi nlereanya. Ọ na-e kwuru tupu nakwa na Huawei ngwaọrụ na-mepụtara na iji android technology nke nwere isi nke oghe isi components. The akpaala okwu "Ọtụtụ osi ite kwatara akwata na efere" na-emetụta android na maka otu ihe chinchi n'ime version-ewetara ihe ịma aka nye ndị ọrụ na nke a. The chinchi ke Kit Kaiser na Lollipop ka data transfer n'etiti IOS na Huawei ngwaọrụ a na-akụda ọrụ. N'aka nke ọzọ na IOS ngwaọrụ na-wuru na mechiri emechi isi iyi nlereanya na-emeghe iyi components nke na-ekwusi ike na ntụkwasị obi nke n'elu ikpo okwu na-eme ka nyefe ọbụna ihe siri ike.
Ụzọ atọ ịgbawa BIOS Paswọdu
> Resource> iOS> otú nyefee Data si iOS Devices ka Huawei ekwentị mkpanaaka na